Chokwadi wakambonzwa kanopfuura kamwechete kuti zvigadzirwa zvemari ndezvipi. Nechinangwa chekutanga chekudyara mune izvi zvigadzirwa ku kuwedzera purofiti mune yako pachako kana yemhuri nhaka. Asi iwe unonyatso kuziva here kuti aya mamodheru ane chii investments? Zvakanaka, zvigadzirwa zvemari zvigadzirwa kana zviridzwa zvine kukosha kwacho kunoenderana nemutengo weimwe nhumbi. Iyo midziyo iyo zvinoenderana nayo inotora zita reiyo yepasi nhumbi, semuenzaniso kukosha kweramangwana pane goridhe kunoenderana nemutengo wegoridhe. Kana mune zvimwe zvinhu zvemari, senge mbishi zvigadzirwa kana simbi yakakosha, pakati pezvimwe zvakakosha.
Chero zvazvingaitika, chishandiso chine simba kwazvo kusimudzira huwandu hwebatsiro pane kudyara. Asi nekufungisisa kwakakosha uye ndeye iyo iyo njodzi yekushanda iwo akakwirira zvakanyanya kupfuura kuburikidza nezvimwe zvakajairika zvigadzirwa zvemari. Iko iko ichokwadi kuti iwe unogona kuwana mari yakawanda, asi nekuda kwechikonzero chimwe chete siyawo ma euro mazhinji munzira. Izvi ndizvo zvimwe zvezvinodikanwa zvaunofanira kufungidzira mukushanda kwezvakatorwa zvemari.
Iko kune akawanda mabviro emari sezvo paine midziyo kwaanobatanidzwa. Neichi chikonzero icho chigadzirwa icho chakanyanya kusiyaniswa mumisika yemari. Nekuti zvirokwazvo, une mhando zhinji kupi kusarudza kubva ikozvino. Chimwe chezvikamu chakanyanya kutengeswa nemasangano emari ndeche izvo zvine chekuita nemhando yekuchengetedzeka. Kusvikira pakuti icho chigadzirwa chinopihwa kusimudzira mwero wakaderera wemubhadharo unopihwa izvozvi. Asi zvine njodzi huru mukutungamira kwayo, sezvaunoona kubva zvino zvichienda mberi.
1 Zvinotora: kukosha kweiyo yepasi
2 Forex zvigadzirwa
3 Zvinogadzirwa mumari uye zvigadzirwa
4 Ndezvipi zvinokuvadza?
5 Zvakanakira zvigadzirwa zvemari
Zvinotora: kukosha kweiyo yepasi
Iyi sarudzo inopa akati wandei emamodeli ekudyara, pakati payo anomira kupfuura zvese zviyero zvezvibereko. Mune ino kesi, icho chakasarudzika chinobva icho, sezvazviri zvine musoro kunzwisisa, zvinoenderana zvakanyanya nemutero wemari. Zvinogadzirwa zvakadai seizvo zvinozivikanwa sechibereko chekutsvagisa mari uye izvo zvavanoshandisa zvakanyanya zvinoenderana nekuti unozvidzivirira kubva mukukwanisa kusiyana kana kuwedzererwa kune chiyero chemubereko. Ndokunge, kana iwe uchifunga kuti aya akakosha oscillation anogona kugadzirwa, iwe unogona kuita kuti kufamba uku kubatsirwe nehunyanzvi hwekuita. Nekuti zviwanikwa zvemari zvinogona kukura kupfuura kuburikidza nezvimwe zvakajairika zvigadzirwa zvemari.
Kubva pane ino maonero, zviyero zvemubhadharo zvinopfuura kungochinjika izvo zvinoshandiswa kubatanidza chero tambo yechikwereti. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinoshanda kuita mari kubva munzira dzakasiyana. Chero zvazvingaitika, ndeimwe yedzimwe nzira dzave kuita fashoni mukushaikwa kwesarudzo dzinokwanisika kuti iwe tora kudzoka pane mari. Nekudaro, icho hachisi chigadzirwa chemari chekushandisa, iyo mhando iyo yakanaka chikamu chevadiki nepakati varimi vemari vanobhadhara. Asi, ihwo hwakawedzera hunyanzvi hwevatengesi.
Ehezve, ichi ndicho chimwe chezvinyanya kuwanikwa mumusika wezvemari. Nekuti mukuita, zano rayo rakavakirwa pakutora mukana wekusiyana mu mari yekutsinhana inonyanya kukosha. Hazvishamise kuti idzi mhando dzezvinobva zvinowanzoitwa sarudzo kana ramangwana pane imwe mari isiri yavo kana kunyangwe nemari mbiri dzekunze. Kubva pane yakajairika senge dhora rekuUS kana iyo euro pachayo kune zvimwe zvisinganzwisisike senge maBrazili reals, pesos kana kunyangwe mari dzisingafungidzirwe dzeSoutheast Asia.
Imwe yehunhu hweichi chakasarudzika chinobva mune zvemari ndechekuti chinokutendera iwe kuti uwane purofiti yakakura kwazvo. Ehezve, pasi pesimba rakakura kupfuura iro rezvinyakare zvigadzirwa zvemari. Kunyangwe nekuda kwechikonzero chimwe chete ichi, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogona zvakare kusiira yakawanda maeuro panzira yeiyi investimenti. Naizvozvo, iyo kuchenjerera Icho chichava chikuru chinowanzoitika dhinomineta yezviitwa zvako. Pamusoro pehumwe hunyanzvi uye zvimwe zvakakosha kufunga. Kuburikidza nechigadzirwa chemari chiri kuve chinozivikanwa nevashambadzi vezvitoro.
Zvinogadzirwa mumari uye zvigadzirwa
Pasina kupokana chimwe chezvinhu zvakaomesesa zvemari zvigadzirwa zvaunogona kuwana izvozvi mumisika yemari. Zvakanaka, mune ino kesi iri kirasi yezvigadzirwa zvinonyanya kuvimba neaseti yakatsinhaniswa mumisika yemasheya, semuenzaniso masheya kana mabhondi. Nekudaro, kune zvekare kazhinji sarudzo pazvinhu zvakagadzirwa, senge mafuta kana goridhe. Nekudaro, kukanganisa kwavo kukuru ndekwekuti ivo vakaomarara kwazvo kushanda nayo.
Neimwe nzira, ivo vakafanana chaizvo neiyo iyo iyo sarudzo kana ramangwana. Nemisiyano mishoma kwazvo maererano nesisitimu yayo uye makanika kushanda pamwe navo. Chero zvazvingaitika, izvo zvigadzirwa zvakaomesesa kupfuura zvimwe zvese uye nekudaro hazvina kuitirwa zvese ma profiles evadiki vepakati nepakati varimi. Kusvika padanho rekuti ivo vanoita kuti iwe urasikirwe nemari yakawanda mukushanda kubva ikozvino zvichienda mberi. Chero zvazvingava, iri zano rauinaro panguva ino rekushandisa mune zvakasvibirira kana kunyangwe simbi dzakakosha, seyakanyanya kukosha mari yemari panguva ino.
Kutengesa zvinhu zvemari hazvina kukodzera kune vese vateereri. Asi kunevane ropafadzo vashoma chete, kwete nekuti ivo vakasarudzika emhando dzekudyara. Asi nekuti iro dambudziko hombe ravanosanganisira kunzwisisa kwavo kwakaomarara. Hazvishamise kuti iwe unogona kunge usiri kutoziva mashandiro aungaita neaya akakosha emari midziyo. Inogona kugadzira inopfuura rimwe dambudziko kwauri kana uchivhura nzvimbo. Semhedzisiro yeizvi, zviri nyore kwazvo kuti kubva ikozvino iwe utarise zvimwe zvehunhu hwakakosha, senge idzo dzatinokufumura pazasi.
Icho chaicho chakasarudzika chigadzirwa chemari chinoda ruzivo rwemberi rwemisika yemari kwaunoshanda. Usaedze kumanikidza mashandiro nekuti ichave nemhedzisiro isingadiwe kune zvaunofarira semudhara uye wepakati investor.
Ehezve, ine zvishoma zvishoma zvine chekuita nekutenga uye kutengesa masheya pamusika wekutengesa. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru nei uchifanira kuzviisa mukati mechikamu chimwe chete mukudyara. Unofunga izvozvo iwo mamodheru ane misiyano yakawanda uye kusvika padanho rekusiyana munzira dzavo. Kusvika padanho rekuti ivo vasingave ivo vanokodzera kwazvo mamodheru ekudyara ehunhu hwako semusima.
Iko hakuna kana imwe chete inogadzirwa, asi pane zvinopesana iwe unogona kusarudza pakati pezvakasiyana zvigadzirwa zvinogona kuchinjiswa kune yako mbiri semushandisi. Kubva mukudyara mune simbi dzinokosha kunge goridhe nesirivhi kutsvaga purofiti mune shanduko dzemari huru dzenyika. Iwe hauna kana muganho wekutsvaga zvemukati zvehunhu izvo zvishoma zvakaongororwa nevatengesi vakuru.
Kana chimwe chinhu chinotsanangudza izvi zvakasarudzika zvigadzirwa zvemari pasina mubvunzo iri kuwedzera huwandu vane. Kusvika padanho rekuti ivo vanogona kuita kuti iwe uwane mari yakawanda kupfuura mune dzimwe nzira dzekudyara. Asi sekureba sekunge iwe uchiziva mashandiro navo, nei kana zvisiri ngozi dzekubvumidzwa dzakanyanya kwazvo. Kwete zvisina maturo, iwe unofanirwa kuzvibvunza pachako kana zvakakodzera kuvashandira kubva zvino zvichienda mberi.
Zvakanakira zvigadzirwa zvemari
Kune rimwe divi, aya emhando dzekudyara anounza iwe mabhenefiti ayo zvimwe zvigadzirwa zvemari zvinoshaikwa. Mupfungwa iyi, imwe yeanonyanya kufarirwa manyepo mukuti inovhura mikova mitsva kune nyika yekudyara. Sezvawakanga usina kumbofungidzira kubva pakutanga. Pakati payo zvakare zvinomira pachena kuti iwe unogona tengesa chero hupfumi hwemari. Seimwe nzira chaiyo kune isina kunaka mamiriro mumisika yemari.
Izvo zvakare zvinoshamisa kwazvo kuti zvigadzirwa zvemari zvinogona kuwedzera kukosha kune mari. Chero bedzi mipiro yako yezvemari isiri yakakura kwazvo. Asi kuburikidza nemabasa ekuwedzera kune echinyakare. Kana uchishanda pasi pemiparamende izvi hapana mubvunzo kuti anogona kuve mabasa ane pundutso pane zvako zvaunofarira. Nekuti iwe uchave uine mamodheru asingafungidzirwe makore mashoma apfuura. Semuenzaniso, mune zviitiko zve yakatorwa kubva kuCO2 choutsi, inflation kana chero imwe.
Hazvishamise kuti iwe uri kutarisana neyakajairika mari chigadzirwa icho chinogona kuchinjika kune akawanda mamiriro uye eakasiyana chimiro. Ndokunge, iwe unogona kuchinjisa chinobva chero nguva. Saka kuti nenzira iyi, iwe une dzimwe sarudzo dzekuita kuti mashandiro abatsire kubva ikozvino. Kunyangwe zvisingakurudzirwe kuti iwe urondedzere ichi chigadzirwa sekunge chiri chekudyara mune yakajairika mari. Nekuti ipapo unenge uri kuita chikanganiso chakakomba icho chingakukuvadze mune chako chishuwo chekuvandudza yako wega kana yemhuri nhumbi. Icho chimwe chezvinhu zvaunofanira kufunga nezvazvo kuvhura kana kugadzirisa zvigaro mune zvakasarudzwa zvemari midziyo. Pamusoro pehumwe humwe hunyanzvi hwekufunga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Ndezvipi zvigadzirwa zvemari?